Ehe, Apple yatove ne patent dhizaini yeSteve Jobs Theatre muApple Park | IPhone nhau
Ehe, Apple yatove ne patent dhizaini yeSteve Jobs Theatre muApple Park
Gore rakapera iyo Cupertino kambani yakatiratidza mune yechiitiko chiitiko iyo horo nyowani umo kuratidzwa kweiyo nyowani iPhone X, iPhone 8 uye 8 Plus kwaizoitika. Mune ino peculiar uye inoratidzika seyakareruka horo maawa mazhinji ekugadzirwa, zvidzidzo uye pamusoro pemari dzose zvakavanzwa.
Yayo fiberglass siringi pamwe neakakura masendimita mashanu-kukora uye zvishoma kupfuura matanhatu-mita mita makristasi akakwirira anoichengeta "yakaturikwa" mumhepo, yakasiya vezvenhau varipo nemiromo yavo yakavhurika gore rapfuura, panguva yekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone mu 5. Panguva yekuvakwa ruzivo rwechivakwa rwakaonekwa uye mushure mekuratidzwa kwayo kwepamutemo, Apple yatowana patent yayo.
Iyo yese Apple Park yakagadzirirwa nehanya asi iyo Steve Jobs Theatre zvakare ine yakawedzera uye yemanzwiro zvinoreva, yekutenda zvese zvakaitwa naMabasa muzuva rake rekambani. Mupfungwa iyi, iri pamusoro pechikomo paunogona kuona chivakwa chikuru cheakavharirwa, imba yekutambira inogamuchira iyo patent yekugadzirwa kwemusuwo wayo.
Kunyoreswa kwepatent sezvavanotiudza mukati Zvichida Apple, anouya yeiyo yapfuura 2016 apo iyo yakavharwa yakatanga kuvakwa uye kusvika nezuro ndipo pakatenderwa kunyorera. Hapana mubvunzo kuti kupindwa muropa nekunyoresa nekupa patent zvese muApple hazvina kuchinja kwemakore, mune ino chivakwa chakakosha mumuzinda mutsva wekambani, asi chero chinhu chinogoneka neApple nemvumo yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Ehe, Apple yatove ne patent dhizaini yeSteve Jobs Theatre muApple Park
Mashandisiro aungaita AirPort Express yeAirPlay 2 yatove ne router
ZENS inotiratidza majaja ayo matsva asina waya